बेलहिया क्वारेन्टाइन चेकपोष्टद्वारा साढे १२ सय अवैध कुखुरा नष्ट | Vetkhabar
Home Breaking News बेलहिया क्वारेन्टाइन चेकपोष्टद्वारा साढे १२ सय अवैध कुखुरा नष्ट
बेलहिया क्वारेन्टाइन चेकपोष्टद्वारा साढे १२ सय अवैध कुखुरा नष्ट
भैरहवा । पशु क्वारेन्टाइन चेकपोष्ट बेलहियाले शुक्रबार ७५ केजी कुखुराको मासु नष्ट गरेको छ । भारतबाट अवैध रुपमा नेपाल ल्याइँदै गरेको अवस्थामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीले बरामद गरी बुझाएको उक्त मासु चेकपोष्टले नष्ट गरेको हो ।
चेक पोष्टले मंसिर २६ गतेदेखि पौस ३ गतेसम्म मात्रै भारतबाट अवैध रुपमा नेपाल भित्र्याइएका गरेका १ हजार २ सय ४६ वटा कुखुरा नष्ट गरेको छ । त्यस्तै, अवैध रुपमा नेपाल भित्र्याइएको ९५ किलो मासु र ६६ केजी माछा समेत बरामद गरी नष्ट गरेको चेकपाष्टका क्वारेन्टाइन अधिकृत डा. शिवलाल भुसालले बताए ।
डा. भुसालका अनुसार चेकपोष्टले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीले बरामद गरेको १ सय ३२ वटा कुखुरा २६ मंरिमा नष्ट गरेको थियो । त्यस्तै, २८ मंसिरमा गाडीसहित ४७४ सहित ५ सय ८५ वटा कुखुरा र १६ केजी माछा नष्ट गरेको थियो । २९ मंसिरमा १ सय ९१ कुखुरा र २० केजी मासु र ३० मंसिरमा १० ओटा कुखुरा नष्ट गरेको थियो ।
त्यस्तै, १ पुसमा सशस्त्र प्रहरी बल २७ नम्बर गण हेडक्वाटर रुपन्देहीले बरामद गरेको २० वटा कुखुरा, ५० केजी माछा र इलाका प्रहरी कार्यालय बेलहियाले बरामद गरेको १ सय ६८ ओटा कुखुरा नष्ट गरेको छ । जिप्रका रुपन्देहीले बरामद गरेको छ ।
अवैध आयातमा संलनहरुबाट चेकपोष्टले ३० हजार रुपैयाँ जरिवानासमेत असुल गरेको छ ।
नेपाल सरकारले २०६३ सालमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी पन्छी तथा पन्छीजन्य पदार्थ आयात गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । कानुनी व्यवस्थाको उलंघन गरी भारतबाट अवैध रुपमा पन्छी तथा पन्छज्य उत्पादन नेपाल भित्रिन भने रोकिएको छैन ।
Previous articleकाकरभित्ता क्वारेन्टाइनद्वारा २ सय केजी माछा नष्ट
Next articleडोल्पाको डाँफे काठमाडाैं ल्याइदैँ
वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार नबन्दा मानव–वन्यजन्तु क्षति बढ्दै
भारतबाट पोल्ट्री जन्य वस्तु आयातमा निषेध
किसानलाई अनुदानमा ड्रागन फ्रुटको बिरुवा वितरण